Gabadhii Neymar Jr Kufsiga Ku Eedaysay Oo Iyada Lafteeda Lagu Soo Oogay Dacwad Ah In Ay Neymar Sumcad Dishay. - Gool24.Net
Gabadhii Neymar Jr Kufsiga Ku Eedaysay Oo Iyada Lafteeda Lagu Soo Oogay Dacwad Ah In Ay Neymar Sumcad Dishay.
Gabadhii Neymar Jr ku eedaysay in uu kufsaday ee Najila Trindade ayaa markeeda biyo kulul ku dhex jirtay kadib markii ay booliiska dalka Brazil ku eedeeyeen in ay samaysay falal sumcad dil ku ah Neymar jr waxaana lagu soo oogay dacwad cusub.
Najila Trindade oo ah gabadha aduunka ku qabsatay eedayntii ay maxkamada dalka Brazil uga furatay in uu Neymar Jr kufsaday ayaa dhawaan bixisay waraysiyo ay kaga sheekaysay xaaladii ay Neymar kala kulantay iyo dhibaatadii ay dareentay kadib kufsiga ay sheegatay.
Laakiin waxaa hadda soo baxay war cusub oo sheegaya in booliiska koonfurta magaalada Sao Paulo in ay maxkamada Comisaría Sexta de Santo Amaro ka xareeyeen kiis ka dhan ah Najila Trindade kaas oo ah in ay gaysatay sumcad dil ka dhan ah Neymar Jr.
Waraysigii ay bixisay Najila Trindade ee laga baahiyay qaar ka mid ah TV-yada dalka Brazil ayaa dhibaatadan u soo jiiday gabadha kufsiga ku eedaysay Neymar waxayna hadda markeeda maraysaa dacwad ka dhan ah oo maxkamada ay booliisku geeyeen.
Najila Trindade ayaa waraysiga ay bixisay waxay arimo shaqsiyada Neymar jr fadeexad ah ku ah hor sheegtay TV-ga iyada oo sugi kari wayday maxkamada iyo booliiska arinta gacanta ku hayay ee baadhitaanka samaynayay.
Laakiin gabadha Najila Trindade ayaa booliiska dalka Brazil ku eedaysay in la iibsaday oo ay musuq maasuq sameeyeen kadib markii ay aragtay kiiskii oo iyada lugaha la soo galay.
Wararka ayaa sheegaya in Tablet ay ku jireen waxyaabaha ay cadaymaha ka dhiganaysay Najila Trindade baadhitaan lagu sameeyay laakiin markii la baadhay waxaa la ogaaday in cida Tabletkan farahooga laga helay ay yihiin faraheeda iyo dadkii ay hudheelka paris wada deganayeen ee ay sida buuxda u aaminsanayd.
Najila Trindade oo cadho ka qaaday in iyada kiis lagu soo oogay ayaa tidhi: “Booliiska waa la iibsaday, ama haddii kale ma aniga ayaa waalan?”.
Najila Trindade ayaa baahisay muuqaalka iyada iyo Neymar Jr oo qol soo wada galaya waxayna kadib ahayd shaqsiga isla muuqaalkeedu markhaatiga ka noqday in ay ahayd qofka dagaalka bilaabay.
Neymar jr aabihii ayaa markii uu arkay muuqaalka ay TV-yada ka sii daysay Najila Trindade waxa uu cadeeyay in aanu laga bilaabo markaas wiilkiisa difaacanayn maadaama oo muuqaalka gabadha lafteedu baahisay uu ahaa mid cadayn u noqday in Neymar la shir qoolay.
Neymar Jr ayaa hore looga yeedhay saldhiga booliiska waxaana la waydiiyay su’aalo iyada oo hore ay booliisku ugu booqdeen xarunta tababarka Brazil halkaas oo ay cadaymo ka heleen isla markaana barihiisa bulshada laga saaray waxyaabo uu soo dhigay oo uu iskaga difaacayay eedaynta kufsi.
Arinta ku dhacday Najila Trindade ayaa la micno ah odhaahda somaliyeed ee tidhaa: “Booraan hadimo ha qodin, haddii aad qodana ha dheerayn ku dhici doonteena mooyee”. waxayna hadda u muuqataa in ay iyada lafteedu dabin sharci ku jirto.
Wali kiiska Neymar jr uu ku eedaysan yahay ayaan dhamaan balse waxay arintu noqotay mid labada shaqsiba uu midba arin gaar ah ku eedaysan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, Booliiska dalka Brazil gaar ahaan Sao Paulo ayaa gabadhan ku eedeeyay in ay sumcad dil ku samaysay Neymar jr waxayna hadda markooda xareeyeen kiiska lagu maxkamadaynayo gabadhan.